Home ASIAN STARS Shinji Kagawa Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Ihe Echiche
LB na-enye Full Story of a football football best known by the nickname; 'Shi'. Ụmụ Shinji Kagawa Ụmụaka Akụkọ nke a na-eme ka ị nweta akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu. Na-amalite.
Shinji Kagawa Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ndụ mbido
Shinji Kagawa a mụrụ na 17 March 1989 na Tarumi-ku, Kobe, Hyịgo, Japan. Malite na nwata, ọ na-enwe mmasị n'egwuregwu football ma nwee ike iburu ya ụbọchị niile. O nwere ike ịkwa ákwá ma ọ bụrụ na enwere ohere iji soro ya gaa ụlọ akwụkwọ.
N'ihi na ọ hụrụ ya, ndị mụrụ ya debanyere aha ya n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ obodo. Mgbe ọ dị nanị afọ iri na abụọ, a kpọrọ ya na ụlọ akwụkwọ mmuta Miyagi maka ịkụziri ndị ọzọ ọzụzụ.
Ọ bụ onye mbụ na-egwu egwuregwu Japanese maka ịbanye na nkwekọrịta ọkachamara tupu ya agachaa ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ọ nwere nrọ dị elu nke na-akpọ Spanish ndị dike, FC Barcelona. Ndị a bụ nanị klọb nke ọ kwadoro dịka nwatakịrị.
Shinji Kagawa Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Afọ Ochie
N'afọ anọ tupu e guzobe J-Njikọ Jamanị Japan, Shinji bụ akụkụ nke ọgbọ ụmụ nwoke, ọ bụ ezie na ọ bụ ezie na ọrụ ịgba chaa chaa na Europe yiri ka ọ ga-ekwe omume.
Mgbe ọ bụ nwata, ọ nọrọ n'oge okpomọkụ na FC Miyagi Barcelona, ​​ụlọ ịgba ụmụaka na Sendai, 500 kilomita site n'ụlọ ya na Osaka. Ụlọ ọrụ ahụ ejikọghị aka na FC Barcelona mana aha ya mana ọ na-akọrọ ụkpụrụ nke onye na-ahụ maka otuism na flair, nkà nke ga-aghọ abụọ n'ime ihe ndị mara mma nke Kagawa.
Shinji Kagawa Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ndụ mmekọrịta
Ya na Ameri Ichinose nọ na ya. N'oge na-adịbeghị anya, e nwere nrọ na ya na enyi ya nwaanyị na-emekọ ihe nzuzo n'ihu ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya.
Otú ọ dị, ọ na-ahọrọ ime ka a ghara ịkwado ya. Ọbụna ịgba alụkwaghịm ya.
Shinji Kagawa Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ịchọta Ịhụnanya Ọzọ
Mgbe ndị otu mba Japan bịarutere n'England ka ha kpọọ Manchester United na June 2013, foto nke ya na enyi nwanyị ọzọ na-esegharị nwere nnukwu nghọtahie.
Ọtụtụ chere na ọ bụ Ameri Ichinose, bụ nwanyị mbụ ya. Mgbe e mesịrị, a maara ya dị ka onye na-ede akụkọ TV na Margaret Natsuki. Akụkọ gosiri na ha anọwo na ọnụ ala dị ala kemgbe 2011.
Shinji Kagawa Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu-Ya na Football
Ngwurugwu ndi a ma ama na ndi ozo. Kagawa bụ onye na-egwu egwu nke na-eme ihe nkiri na-arụ ọrụ egwuregwu. Ọ nwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri ọzọ. Kagawa nwere njirimara dị mma na bọl na ịme mkpebi ma na-agafe. Ọ bụ onye na-egwu egwu nke na-agbasi mbọ ike na-agbachitere ndị iro ya iji chọpụta ihe ga-enyere gị aka ịmegharị ma ọ bụ site na bọl. O nwere nnukwu egwu na-egwu ma na bọl. Ọ nwekwara nnukwu ọnọdụ nke na-eme ka ọ nwee otu n'ime anya kacha mma maka mgbaru ọsọ.
Eleghi anya àgwà ya kachasị mma bụ ịba ọgaranya, ịgafe ịdọ aka ná ntị, imepụta ihe, ịkwanyere onwe ya n'oge agha na ikike ịhọrọ isi ihe. Ọ dị nnọọ ngwa ngwa ma nwee ike ịwakpo ya ma merie ihe mgbaru ọsọ ya. N'ọnọdụ ụfọdụ maka ndị otu mba, ọ na-egwuri egwu na mpaghara aka ekpe, ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'etiti etiti.
Egwuregwu ndị Japan
Eric Bailly Child Story Story Na-emeghe Ihe Ndị Na-eme Ememe
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko karia ihe omuma